Maitiro ekunyorera Blog Post
Chipiri, May 17, 2011 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Izvi zvingaite senge yekutanga fosi ... asi iwe ungazoshamiswa nevanhu vangani vanondibvunza zano rekuti unganyora sei inoshanda blog post. Ini ndinowedzera zvakare kuti dzimwe nguva ndinokanganisika pandinoverenga zvimwe zvakatumirwa pane zvaive chinangwa, kukosha kwacho, uye kana blogger yakatombofunga nezve muverengi sezvaakanyora posvo.
Chii pfungwa yepakati yepositi? Pane mhinduro yauri kuyedza kupa kune chaiwo mubvunzo? Usavhiringidze vanhu nekusanganisa akasiyana mazano mune imwe blog blog. Musoro uyu unoshamisa here? Zvinoshamisa zvemukati zvinogoverwa mumasocial media uye zvinogona kukwevera vamwe vaverengi. Sarudza mhando ipi yepositi uchanyora.
chii mazwi akadzama iwe unogona kunongedza neako blog post? Chokwadi chinotaurirwa, ini handigare ndichitsvaga mazwi akakosha ekukurudzira kana ndiri kubloga, asi inzira yakanaka yekuwana vaverengi vatsva. Usapinze toni yemazwi mune imwe blog blog ... zvakanaka kuti utarise pamashoko mashoma anoenderana.
Shandisa mazwi akakosha mune yako posvo zita, mazwi ekutanga epositi yako, uye ekutanga mazwi ako meta tsanangudzo. Bolding mazwi akakosha kana kuzvishandisa mumisoro midiki, uye kumwaya mumusoro wako zvinogona kuita musiyano pane yako posvo yakanongedzwa neinjini dzekutsvaga.
Ariko mamwe mablog blog iwe unogona kureva paunenge uchinyora yako yazvino post. Kubatanidza mukati kune zvimwe zvinyorwa kunogona kubatsira muverengi kunyudza zvakadzika uye kumutsidzira zvimwe zvekare zvinyorwa zvawakanyora. Kubatanidza kunze kunogona kusimudzira vamwe maindasitiri vanhu uye nekupa imwe yekuwedzera furu yekutsigira yako post.
Pane pane mumiriri mufananidzo kuti iwe unogona kushandisa izvo zvinosiya fungidziro kune muverengi? Uropi hwedu hahuwanzo rangarira mazwi… asi isu tinogadzirisa uye tinorekodha mifananidzo zvirinani. Kuwana chifananidzo chikuru chekumiririra zvemukati chako kuchasiya zvimwe zvekufungidzira nevaverengi vako. Kuwedzera mamwe mavara kumufananidzo kunogona kubatsira ne SEO. (Uye kana mufananidzo wakakosha chiuru chemazwi… an infographic inokosha 100,000 uye a Video inokosha miriyoni!)
Unogona here kunyora zvirimo uchishandisa mabara mapoinzi? Vanhu havaverenge mablog mablog zvakanyanya sezvavanoaongorora. Kushandisa mabara ane mabara, ndima pfupi, misoro yemusoro, uye mazwi akashongedzwa anogona kubatsira vanhu kuongorora posvo uye nyore kusarudza kana vachida kuchera zvakadzika.
Unoda kuti vanhu vaite sei do mushure mekunge vaverenga chinyorwa? Kana uine blog yemubatanidzwa, pamwe ndeye kuvakoka kuti varatidze kana kukufonera. Kana iri bhuku rakadai, pamwe nderekuverenga zvimwe zvinyorwa pamusoro wenyaya kana kuzvisimudzira kunetiweki dzavo. (Inzwa wakasununguka kurova mabhatani eRetweet uye Senge pamusoro!)
Kusvika papi yako blog post inofanirwa kunge iri? Chero bedzi zvichitora kuti uwane poindi yako - haichazombovi zvakare Ini ndinowanzo tarisa zvandaitumira uye ndoona kuti ndakabhururuka zvishoma panenyaya - saka ndichaichenesa uye ndocheka zvese zvekunze kunze kwayo. Chinyorwa chinonyanya kufarirwa chandakanyora chaive 200 Blog Post Pfungwa… yaive yakareba, asi yakashanda! Kana ini ndiri kunyora ndima, ini ndinowanzo chengeta iyo kune mashoma epfupi ndima - imwechete kana maviri mitsara misoro. Zvekare, kuita kuti zvirimo zvive nyore kugaya chinhu chakakosha.
Tag uye gadza yako posvo nemazwi akakosha iwe waungade kuti vateereri vawane zvirimo pasi. Kumaka nekuisa mumapoka kunogona kubatsira iwe nevaverengi vako kuwana zvirinyore zviri nyore pavanenge vachikwenya saiti yako nezveimwe nhaurwa. Inogona zvakare kubatsira kuronga zvimwe zvemukati senge zvinyorwa zvakabatana.
Ratidza humwe hunhu uye ipa maonero ako. Vaverengi havasi kugara vachitsvaga kuti vawane mhinduro chete muchipositi, varikutsvaga kuti vawane pfungwa dzevanhu dzemhinduro Kukakavara kunogona kutyaira yakawanda yakawanda yekuverenga ... asi ita zvakanaka uye uremekedze. Ini ndinoda kupokana vanhu pablog rangu ... asi ini ndinogara ndichiedza kuzvichengeta kumusoro wenyaya uripo, pasina kushevedza zita kana kutaridzika sedhongi.
Goverana Zvemukati Zvako neBusiness Community
May 18, 2011 pa 12: 59 AM
Anoshamisa chinyorwa chinotaura nezve technical padanho rekunyora uye kutumira blog. Ruzivo rukuru rwekutarisa usati watumira yako inotevera blog.
May 25, 2011 pa 12: 51 PM
Kana tikamisa chinzvimbo nezvatinobvisa kubva pambiru iyi posvo inokwira kumusoro. Iyo posvo pachayo muenzaniso wepositi. Semuenzaniso, # 4 mamwe mablog blog - chii chiri gumi mune iyo posvo? Ndatenda.
Vic @ Bhizinesi Matipi Blog
Nov 11, 2011 pa9: 54AM
Mufananidzo wakanaka unomiririra zvakanaka iyo blog posvo inzira yakanaka yekukwiridzira edu eblog blog. Inobatsira vaverengi kuti vanzwisise zvakanyanya chero zvinyorwa nekungovapa iwo meseji kuburikidza nemufananidzo iwoyo.
Nov 11, 2011 pa10: 37AM
Ndatenda Doug. Haimbove zano rakaipa rekudzokera kune zvekutanga maitiro ekunyorera yakanaka posvo. Neraki iro puratifomu yandinoshandisa (Compendium) inobatsira kunditungamira uye kunditsigira pane mazhinji eaya matanho, asi danho rako rekutanga ichokwadi uye dambudziko rangu guru pachangu paunenge uchiedza kunyora yakanaka posvo. Zvinosetsa kuti iwe wakabatanidza yako mazana maviri emukati mazano mazano kutumira semuenzaniso wepositi refu. Yakareba, asi iri nyore kugaya uye inobatsira vanhu kuitisa pane mamwe emamwe matanho aunonyora pano. Ndinovimba vaverengi vako vatarise iyi link kunze!
Nov 11, 2011 pa10: 50AM
Hesi Brian! Kutenda nekumira uye kupindura - tarisiro zvese zvakanaka!
Mbudzi 12, 2011 na2: 26 PM
Ndatenda Doug nezano rese. Ini ndiri mutsva kublog repasirese uye ndazviona zvakaoma kujekesa uye kunyatsoita kuti pfungwa yangu iyambuke. Ini ndichave ndiri kushandisa aya matipi mumablog angu ari kuuya.
Mbudzi 12, 2011 na3: 54 PM
Mukuru, Napolean! Tiudze kana iwe uine chero mibvunzo.
Zvita 27, 2011 na6: 29 PM
Handina kumbobvira ndaverenga kana kutumira pane blog, saka ichi chaive chinyorwa chakakwana! Kutenda nekutsanangura zvekutanga nenzira inonzwisisika.
Tevere, ini ndinofanira kudzidza kuti "Ini ndinosaina chinhu ichi, uye chii chinoitika kana ndobaya" Tumira se… "?
Ndinofungidzira ndave kuda kuziva!
BTW, ini ndinozivikanwa seCharacterMaker.